यी हुन् प्रदेशको अस्थायी सदरमुकाम र भवन, कुन प्रदेशको कहाँ ? – Saurahaonline.com
यी हुन् प्रदेशको अस्थायी सदरमुकाम र भवन, कुन प्रदेशको कहाँ ?
काठमाडौँ, २१ पुस । सहरी विकास मन्त्रालयले प्रदेशको अस्थायी राजधानीसहित कार्यालय स्थापना गर्ने भवनहरूको टुंगो लगाएको छ ।उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि लागू हुनेछ । प्राविधिकहरू खटाएर भौगोलिक संरचनाअनुसार ठाउँ छनोट गरिएको हो ।